Ciidamada Xoogga dalka oo howlgalo ka sameeyey Gobalka Shabeelada Hoose. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidamada Xoogga dalka oo howlgalo ka sameeyey Gobalka Shabeelada Hoose.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalo qorsheeysan ka sameeyay deegaano katirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo la sheegay in miinooyin lagu Aasay.
Howlgalka oo ay sameeyeen ciidanka sida gaarka ah u tababaran xoogga dalka iyo ururka 4-aad guutada 17-aad kumaandooska xoogga dalka gor-gor ayay ka sameeyeen deegaanka bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose kuwaasi oo ay kamid yihiin Balow iyo Nuunaay.
Taliyaha uruka 4-aad ee kumaandooska xoogga dalka gor-gor ayaa sheegay in howlgalka Ciidamada ay ku guuleysteen inay kusoo saaraan Afar miinooyinka dhulka lagu aaso ah, kuwaas oo lagu Aasay inta udhexeeysa degmada awdheegle iyo deegaanka bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliyaha uruka 4-aad ee kumaandooska xoogga dalka gor-gor ayaa howlgalkan ku sheegay in uu yahay mid looga hortagayo weerarada Al-Shabaab ay mararka qaar ka fuliyaan deegaanada Gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale saraakiisha hogaamineysay howlgalkan ayaa sheegay iney sii wadi doonan howlgalada lagula dagaalamayo AL-shabaab kuwaas oo ku sugan qeybo kamid ah gobolada dalka.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay kordhiyeen dagaalka ay kula jiraan AL-shabaab iyadoo ay dhawaan ahayd markii ciidamada xoogga dalka iyo AL-shabaab ku dagaalameen gobolka shabeelada dhexe dagaalkaas oo AL-shabaab looga dilay ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsan AL-shabaab.
Ciidamada Xoogga dalka oo howlgalo ka sameeyey Gobalka Shabeelada Hoose. was last modified: June 12th, 2021 by Admin
Wasiirka Gaashaandhiga oo ku guuleystey kursi Aqalka Sare ah
Dhageeso Barnaamijka kulanka Warsan Caawa ay kujiraan wareeysi xasaasi ah 3-11-2016